လှကျော်ဇော - ဝူဟန့်မှပုံပြင်များ (၃) - MoeMaKa Media
Home / China / Community / Coronavirus / Hla Kyaw Zaw / လှကျော်ဇော - ဝူဟန့်မှပုံပြင်များ (၃)
လှကျော်ဇော - ဝူဟန့်မှပုံပြင်များ (၃)
China, Community, Coronavirus, Hla Kyaw Zaw
(မိိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာကစပြီး ဝူဟန့် (ဟူပေ ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်) မှာ အအေးမိ တုပ်ကွေးရောဂါအပြင်းစား (အဆုပ်ရောင်) ဖြစ်လာတာ သတိထားလာမိကြပါတယ်။ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် အရှင်တွေရောင်းတဲ့ဈေးက စဟန်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း ထွက်လာပါတယ်။
ဒိဇင်ဘာ (၃၁) ရက်မှာတော့ တရုတ်အစိုးရက ကမ္ဘာကျန်းမာရေးဌာန (W.H.O. ) ကို ဆားဆ်ရောဂါနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ရောဂါဆန်းတမျိုး ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို အကြောင်း ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းကစလို့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးများကို ရှီကျင့်ဖျင် ဦးစီးပြီး အကြိမ်ပေါင်း (၇) ကြိမ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရုံမျှမက တပြည်လုံးက တာဝန်ခံများပါရှိတဲ့ တယ်လီကွန်ဖရင့်ကိုလည်း (၂) ကြိမ်လုပ်ဆောင်ပြီး အကြံဉာဏ်များကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ (အဲဒီကွန်ဖရင့်တွေမှာ ပါဝင်တက်ရောက်သူများဟာ အလွန်များပြားပြီး တကြိမ်မှာ လူပေါင်း (၁) သိန်းကျော် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘက်စုံနယ်ပယ်စုံက အသံများကို နားထောင်ခြင်းပါ။)
ဇန်နဝါရီ (၂၂) ရက်နေ့မှာတော့ ဟူပေပြည်နယ်တခုလုံးပိတ်ဆို့ရေး (ပြည်နယ်တွင်းက ဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရေး) ဆိုတဲ့အမိန့်ကို ပြတ်သားစွ ာချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ (၂၃) ရက်နေ့မှာတော့ အများဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ (မြို့တွင်း မြို့ပြင် ဘတ်စ်ကား လိုင်းများ၊ မြို့ပြင်ထွက်တဲ့ လေကြောင်းနဲ့ မီးရထားလမ်းများ) ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ လူဦးရေ (၁၀) သန်းကျော် ရှိတဲ့ ဝူဟန့်ကို ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းဟာ နိုင်ငံရေးအရ အရဲစွန့်မှုတခုဖြစ်ပြီ းလူသားသမိုင်းမှာ မကြုံဖူးသေးတဲ့အဖြစ်ပါ။ အခုပြန်ကြည့်တော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မှန်တယ်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း ရှိတယ် ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
၂။ ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဦးတည်ချက် - ပြည်သူလူထုက ပြည်သူလူထုအတွက် ဆင်နွှဲတဲ့ ပြည်သူစစ်ပွဲ။ တပြည်လုံးက အရင်းအမြစ်အားလုံးကို စုစည်းပြီး ရင်ဆိုင်ရန်။
ဇန်နဝါရီ (၂၅) ရက် မှာ ရှီရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် လီခက်ချန်ဦးစီးတဲ့ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ဒုဝန်ကြီးချုပ်တဦးကို ဟူပေက မြေပြင်လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစီးကြီးကြပ်ဖို့ စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။
အစောပိုင်းတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားနည်းချက်များ တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ဟူပေပြည်နယ်နဲ့ ဝူဟန့်က ပါတီတာဝန်ခံများကို တခြားလူများနဲ့ အစားထိုး လွှဲပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
၃။ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ပြဿနာများကိုတခုချင်း (တပြိုင်နက်) ဖြေရှင်းပါတယ်။
(က) ဆေးဝန်ထမ်းများလုံလောက်ရေး၊ - တပြည်လုံးက ဆေးဝန်ထမ်းပေါင်း ၄ သောင်းကျော်ကို ဟူပေပြည်နယ်က ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မြို့နယ်တွေကို စေလွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရှေ့ဆောင်ပညာရှင်များအပါ တပြည်လုံးရှိ အရေးပေါ်အသက်ကယ်ဌာနဆိုင်ရာ ပါရဂူများ ၁၀%ကို ဆင့်ခေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆေးအဖွဲ့တွေဟာ မိမိတို့ဆေးရုံတွေမှာရှိသမျှ ဆေးပစ္စည်းတွေပါ တတ်နိုင်သလောက် သယ်ဆောင်လာကြရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်ကယ် အထောက်အကူပစ္စည်းတွေ - Life Supporting Machines.
(ခ) ဆေးရုံအဆောက်အဦး လုံလောက်ရေး - ကပ်ရောဂါအဓိကဖြစ်နေတဲ့ ဝူဟန့်မှာ ဆေးရုံ (၈၆) ရုံကို ဒီဗိုင်းရပ်ရောဂါ အထူးကုဆေးရုံများအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ပြင်းထန်လူနာများအတွက် လူနာ (၁၀၀၀) ကျော် စီ လက်ခံနိုင်တဲ့ အထူးကုဆေးရုံကြီး (၂) ရုံကို နှစ်ပတ်အတွင်း တည်ဆောက်တယ်။ (ပူးတွဲပါပုံ)
ရောဂါမပြင်းထန်တဲ့ လူနာတွေကိုထားဖို့ အားကစားရုံတွေ၊ ပြတိုက်တွေကို ပြင်ဆင်ပြီး ယာယီဆေးရုံ (၁၆) ရုံ အဖြ စ် ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်။ တလအတွင်း လူနာကုတင်ပေါင်း (၆၀၀၀၀) ခြောက်သောင်း ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
(ဂ) ဆေးကုသရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံ - အဲဒီဒေသအနီးအနားက စက်ရုံများက အမြန်လှည့်ထုတ်ပေးပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာများကို အမြန်ဆုံးပို့နိုင်အောင် စီစဉ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ နှာခေါင်းစည်း၊များ၊ ဆေးဝန်ထမ်းများအတွက် ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံများသာမက အဆင့်မြင့် အသက်ကယ် စက်ယန္တရားများကိုလည် းအချိန်တိုအတွင်းထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (E.C.M.O and Ventalaters)
(ဃ) ရောဂါအကဲဖြတ်ရေး၊ကာကွယ်ဆေးနဲ့ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရေး -
တက္ကသိုလ်များ၊ သုတေသနအဖွဲ့များ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ရောဂါအကဲဖြတ်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအလုံအလောက် ထုတ်နိုင်ရုံမက စစ်ဆေးတဲ့အချိန်ကို (၁၅) မိနစ် အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့တယ်။ ရောဂါရှိကြောင်း အဖြေထွက်လာပါက အစိုးရက အခမဲ့ကုသပေးပါတယ်။
(င) တပြည်လုံးကိုလည်း ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ -
ပစ်မှတ်ရှိရှိ (ပြည်နယ်တိုင်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပြီး) တင်းကျပ်စွာ လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။
လူပေါင်း ၁.၄ ဘီလီယံရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ တတိုင်းပြည်လုံး စနစ်တကျ အစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုကို နာခံလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ဒီရောဂါဘေးဆိုးကြီးကို တစုံတရာအတိုင်းအတာထိ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
လှကျော်ဇော - ဝူဟန့်မှပုံပြင်များ (၃) Reviewed by MoeMaKa on 12:00 PM Rating: 5